रोपाईँ ढिला भयो, अब उत्पादन के होला ? सुन्नुस् विज्ञ यसो भन्छन् (अडियोसहित) – Online Jagaran
सुर्खेत, २२ साउन (जागरण) । साउनको अन्तिम हप्ता सुरु हुनै लागको छ । यो अवधिमा रोपाइ सकिनु पर्ने हो । तर कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा अर्झैँ रोपाइ हुन बाकीँ नै छ । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने भएकाले र ढिलो गरि बर्षात सुरुभएका कारण अधिकाशं किसानले धान रोप्न पाएका छैनन् ।
ढिला रोपेको धानबाट उत्पादन लिन सकिएला त ? ढिला गरी रोपेको धानबाट उत्पादन लिन किसानले के के कुरामा ध्यान दिने ? यसैबिषयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख प्रेमदेव गिरीसँग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलाई जागरणकर्मी मुना हमालले सबैभन्दा पहिला कहिलेसम्म धान रोपी सक्नुपर्छ ? भनेर सोध्नुभएको छ । सुन्नुस् यो कुराकानी (अडियो) ।
कर्णालीमा एनजिओहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट चलाउने तयारी
९ चैत्र २०७५, शनिबार ०६:२४ March 23, 2019 जागरण
पर्यटकको प्रतिक्षामा कछुवा दह (अडियोसहित)
११ माघ २०७७, आईतवार १३:१९ January 24, 2021 जागरण